Satroka vita amin'ny landy "Vintage rose" - Moi Mili
Home > Satroka kapoaka "Vintage rose"
Satroka kapoaka "Vintage rose"
Ilay satroboninahitra vita amin'ny Moimili tany am-boalohany "Vintage rose" dia tsy hiasa ho amin'ny ampahany amin'ny fitafian'ny karnaval an'ny mpanao ody ratsy fotsiny. Izahay koa dia manolotra azy ho fanampin'ireo vokatra hafa miaraka amin'ity motifan'ny voninkazo ity.
Ny satroboninahitra ho an'ny zaza dia voatana mafy avy amin'ny lamba landy avo lenta. Ampifangaro roa izy io ary mifanentana amin'ny lohan'ny zaza sy ny lohan'ny ray aman-dreny amin'ny fatorana an-damosina. Ny satrobon'i Moi Mili dia ilaina ho an'ny fahafinaretana, ho fety amin'ny akanjo, ho an'ny fotoam-pivoriana sary na ho toy ny props amin'ny fampisehoana.
Ny fitsangatsanganana dia mifanentana amin'ny Crown, famoronana andiana majika tonga lafatra.
Halavan'ny Crown tsy misy fehezin'ny: 40 cm.
Fitaovana: landihazo, landy madio, landy voajanahary, tadiny volamena, kapoakan'ny loham-pianakaviana